Laacibkii hore ee Liverpool Ryan Babel oo ku biiray Deportivo – Gool FM
(Galicia), 15 Sebt 2016 –Laacibkii hore ee garabka uga ciyaari jiray kooxda Liverpool, Ryan Babel ayaa ku biiray kooxda Deportivo La Coruna ee Spain, isagoo maanta tijaabada caafimaad u maray.
Babel oo horey ugu soo ciyaaray Ajax ayaa koox la’aan ahaa tan iyo markii uu ka tegay kooxda Al Ain ee Imaaraadka Carabta horraantii sanadkan, waxaana haatan heshiiskiisa Deportivo uu ku eg yahay illaa 31 December 2016, inkastoo ay jirto shuruud ah in loo kordhin karo qandaraaska.
Ciyaaryahankan u dhashay waddanka Holland oo 29 sano jir ah ayaa sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay ku biiriddiisa Deportivo, isla markaana uu hubo 100% in uu kooxdiisan cusub sii joogi doono inta ka hartay xilli ciyaareedkan.
Babel waxa uu laba xilli ciyaareed u soo dheelay kooxda Kasimpasa ee Turkiga ka hor intii uusan ku biirin kooxda Al Ain oo iyadana iska fasaxday markii uu ka soo muuqan waayay.
Babel xilligii uu u ciyaarayay Liverpool